Sergio Ramos oo soo diray MUUQAAL uu ku caddeynayo inuusan Xanaf gaarsiin Raheem Sterling – Gool FM
(Europe) 17 Okt 2018. Sergi Ramos ayaa bartiisa Twitter ka soo dhigay Muuqaal uu isku difaacayo kaddib markii lagu eedeeyay inuu ku istaagay Raheem Sterling ciyaartii uu Ingiriiska 3-2 uga adkaaday Spain tartanka Nations League.
Kabtanka Real Madrid ayaa lagu eeedeeyay inuu si kas ah ugu istaagay weeraryahanka Manchester City kaa oo labo gool dhaliyay kulankaas.
Taageerayaasha England oo awalba xarash u haayay Ramos maadaama uu garabka ka dhaawacay Mohamed Saalax ayaa Baraha bulshada si wayn ugu dhaleeceeyay kabtanka xulka Spain kaddib markii ay sheegeen inuu si kas ah ugu istaagay Sterling.
Ramos ayaa Muuqaalka uu isku difaacayo soo raaciyay qoraal yar oo ah “Malahan wax kaloo la sheego”.
Koscielny oo dib ugu soo laabtay tababarka Arsenal ka hor kulanka Leicester City +SAWIRRO